Fitsangatsanganana an-dalamby mampidi-doza ataon'ny mpizahatany: Misy fotoana ve mety hanararaotana?
Home » Lahatsoratra farany farany » Travel Travel » Fitsangatsanganana an-dalamby mampidi-doza ataon'ny mpizahatany: misy fotoana ve?
Travel Travel • Vaovao Mafampana Aostralianina • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovao farany Brezila • Vaovao Mafana China • Entertainment • Hospitality Industry • Vaovao • Rwanda Breaking News • Tourism • Travel Wire News • Etazonia Vaovao Vaovao
Fitsangatsanganana an-dalamby mampidi-doza ataon'ny mpizahatany: misy fotoana ve?
CN Tower EdgeWalk - Sary natolotry ny cntower.ca
Mpanoratra Srilal Miththapala - eTN Sri Lanka
Ny haino aman-jery sosialy, ary na dia ny sasany amin'ireo haino aman-jery mahazatra aza dia nampientanentana avokoa talohan'ny krizy COVID, rehefa nisy sarin'ny mpivady mpizahatany niseho tamina fiaran-dalamby tany Sri Lankan tamin'ny fialànan'ny pelaka, nankafy ilay fotoana nampientam-po.
Nisy ny ady hevitra mafana momba ity endrika fampiroboroboana an'i Sri Lanka ity, miaraka amin'ny olona maro miresaka momba ny loza ateraky ny fomba fanao toy izany.
Nisy ny ahiahy fa hitondra fampahalalana ratsy ho an'i Sri Lanka izany raha misy zavatra mampidi-doza hitranga.
Ity ampahan'ny fiaran-dalamby manaraka ny zotram-piaramanidina ity dia azo inoana fa iray amin'ireo làlamby tsara indrindra eto amin'izao tontolo izao.
Ary marina loatra izany hoy aho. Izaho manokana dia niditra tao amin'ny antokon'ny korana izay niteny mafy nanohitra an'io.
Na izany aza, rehefa nieritreritra tao ivelan'ny boaty aho, dia nieritreritra - Afaka mamorona fotoana eto ve isika?
Ilay traikefa vaovao sy mpizahatany izay mitady fatratra ankehitriny
Tsy misy isalasalana fa misy ampahany vaovao amin'ny fahaiza-manavaka, tanora kokoa, traikefa ary fitsangatsanganana mitady mpizahatany, mipoitra sy mandeha manerana an'izao tontolo izao. Tena mailaka amin'ny Internet sy ny haino aman-jery sosialy izy ireo, mitady traikefa mahaliana sy mahaliana kokoa, ary matetika dia mahatsiaro tena tontolo iainana. Matetika izy ireo no matetika mijery ireo fialantsasatra eny ivelan'ny kianja, kasaina tsirairay araka ny filany sy ny filany.
Nandritra ny taona maro, ny olombelona dia nanery ny fetran'ny fikarohana: nandresy ny tany, ny ranomasina ary ny habakabaka isika. Nahita zava-mahatalanjona maro tsy fantatra tsy fantatra momba ny planetantsika isika miaraka amin'ny mangetaheta fahalalana tsy misy fetra.
Tsy misy hafa amin'izany ireo mpizahatany. Mba hialana amin'ny andavanandrom-piainany isan'andro dia mitady zavatra hafa izy ireo, eny fa na dia miditra amin'ny toerana feno fankahalana na mampidi-doza aza mba hiaina ny fientanam-po amin'ny fahitana sy ny fahatsapana fientanam-po. Tsy efitrano fandraisam-bahiny madio intsony no misy trano sy sakafo isan-karazany ary hazavana ho an'ny mpizahatany.
Araka ny booking.com, ny faniriana traikefa amin'ny fananana ara-nofo dia mitohy manosika ny fanirian'ny mpandeha hanao dia lavitra tsy hay hadinoina sy tsy hay hadinoina: 45% ny mpandeha no manana lisitry ny siny ao an-tsaina. Ny tena azo inoana fa hiseho amin'ny lisitra iray siny dia ireo mitady fientanentanana te-hitsidika valan-javaboary malaza eran-tany, mpizahatany mitady handeha amin'ny dia lavitra epic, na mitsidika toerana lavitra na sarotra.
Ny teôria fampihenana ny saina amin'ny psikolojia dia manambara fa ny iray dia tsy ao anaty fahatanterahana tanteraka, ary amin'izany, misy foana ny drive izay tokony ho afa-po. Mampitombo ny fihenjanana an-tsitrapo ny olombelona sy ny biby hafa amin'ny alàlan'ny fizahana ny tontolo tsy fantany, ny adin-tsaina manosika ny tenany, ary ny fivoahana ireo faritra mampionona azy ireo. Izany dia manome azy ireo fahatsapana fahombiazana sy fahafaham-po amin'ny tenany.
Noho izany, ny fientanentanana tsy fantatra, ny zava-niainana ary ny fihazakazahana adrenalinina dia manintona ireo mpandeha.
Inona no nataon'ny firenena hafa?
Araka ny voalaza, firenena maro no miaina traikefa tokana, tsy hay hadinoina ary manaitaitra amin'ny fanolorany vokatra. Vitsy no voalaza eto ambany.
Mandehana manaraka ny Tetezan'i Harbour Sydney
Ny vondrona kely dia entina mandehandeha manaraka ny vy sy arched Bridge ao amin'ny Harbour Bridge ao Sydney. Ny 360 deg mahery. ny fahitana avy amin'ny tetezana, 135 metatra ambonin'ny tany, ny seranan-tsambo, ary ny tranon'ny Sydney Opera eo akaiky eo, na dia miharihary tanteraka amin'ireo singa aza dia zava-niainana tsy fahita firy.
Any avaratra andrefan'ny faritanin'i Hunan any Shina, afaka mitsangatsangana an-tongotra am-pilaminana ny mpitsidika ny lalantsara mifamatotra amin'ny Tianmen Mountain - 4,700 XNUMX metatra ambonin'ny tany.
Ny lalana mankeny ambanin'ny vera dia mihoatra ny 300 metatra ny halavany ary dimy metatra monja ny sakany, manome traikefa izay voalaza fa nahafaly sy nampatahotra.
Ny CN Tower EdgeWalk, Kanada
Ny fisarihana avo indrindra any Toronto dia mamela ny olona hijoro eo an-tsisin'ny CN Tower ary hiankina. Io no boribory feno avo indrindra eto an-tany, dia an-tongotra tsy an-tanana amin'ny sisin-kazo metatra 1.5 metatra manodidina ny tampon'ny pod lehibe an'ny Tilikambo, 356 metatra, misy rihana 116 ambonin'ny tany. EdgeWalk dia Traikefa amin'ny sonia kanadiana ary traikefa amin'ny sonia any Ontario.
Gorilla Safaris any Rwanda
Karazana fotoana tsy manam-paharoa fitsangatsanganana an-tongotra any Rwanda sy Oganda no ahafahanao mitsangatsangana any anaty ala mikitroka ny mason'ireo Gorila ao amin'ny fonenany voajanahary. Traikefa safari afrikana tsy manam-paharoa io. Ity fotoana ity dia mamela fahatsapana maharitra sy tsy hay hadinoina izay tena akaiky an'io bibidia be voninahitra io.
Vitsy ireo. Ka efa misy isan-karazany ny manintona mpitsidika mampientana ny mpizahatany eran'izao tontolo izao.
Fiarovana - ny toe-piainana mihoa-pampana
Ireo fizahan-tany mpizahatany manaitaitra sy toa mampidi-doza ireo dia manana anaram-piaraha-monina iraisana izay tsy nilefitra mihitsy - fiarovana.
Ny fiarovana no zava-dehibe indrindra amin'ireo hetsika rehetra ireo ary iharan'ny fanaraha-maso henjana sy famerenana matetika. Ny mpiasa rehetra mitarika sy mampianatra ireo mpizahatany mitady fientanam-po ireo dia voaofana sy voafehy tsara.
Ny fitaovana ampiasaina amin'ny fiarovana toy ny harnesses sy ny fehikibo fiarovana dia natao ho an'ny fenitra avo lenta indrindra ary sedraina matetika. Tsy misy avela ho azy ary raha sendra misy loza mitatao kely indrindra noho ny toe-piainana tsy ampoizina dia mihidy vonjimaika ny fisarihana. (oh: rehefa misy rivotra mahery, miato ny lalana an-tanan'i Sydney Harbour).
Ilaina maika ny fepetra fiarovana toy izany, satria ny lozam-pifamoivoizana tsy ampoizina dia mety hiteraka voka-dratsy ateraky ny raharaham-pitsarana ary na dia ny fanakatonana ilay manintona aza.
Ka ahoana ny momba ny diaingeninay?
Ny mahasarika ny fiakaran'ny fiaran-dalamby ambony Sri Lankan (matetika eo anelanelan'ny Nanu Oya sy Ella - ny faritra mahasarika indrindra) dia ny fisianà mpizahatany mijoro eo amin'ny vodin'ny vavahady misokatra ho an'ny fiaran-dalamby ary mahatsapa ny rivotra mangatsiaka mamely ny tarehin'izy ireo rehefa mifoka ilay tany havoana sy toeram-pambolena dite. Ity dia zavatra tsy azon'ny ankamaroan'ny mpizahatany andrefana atao mody any an-tranony, izay ahidiana ho azy ny varavaran'ny làlambe rehetra rehefa manomboka mihetsika ny lamasinina.
Raha ny marina dia nolazaina tamiko fa ny sasany amin'ireo mpizahatany ao Aostralia dia angatahin'ireo mpizahatany manokana handamina an'ity traikefa ity ho azy ireo, rehefa mamandrika ny fitsidihany.
Ka maninona no tsy mahay mamorona ary manintona tena tsara amin'izany?
Tsy afaka manova kalesy iray ve isika mba hananana lavarangana misokatra manaraka ny sisiny ahafahan'ny olona mijoro eny ivelany sy mahatsapa ny tontolo misokatra? Izy io dia azo ampitaina amin'ny lalamby azo antoka ary ny olona tsirairay dia azo alahatra amin'ny kalesy miaraka amin'ny fehikibo (toy ny ampiasaina amin'ny fisarihana hafa izay misokatra amin'ireo singa ireo ny fifandraisana). Ny fiampangana manokana dia azo alaina amin'ity traikefa ity.
Antony iray manohana ny lafiny fandriam-pahalemana dia mandritra ny fivezivezena io fiakarana io, noho ny havoana mideza, mandeha amin'ny sifotra ny fiaran-dalamby, tsy toy ny any amin'ny firenena vahiny izay mety hahatratra 80-100 km isan'ora ny hafainganam-pandeha.
Ity fisarihana ity dia azo ampiasaina ho mpamatsy vola ho an'ny departemantan'ny lalamby satria ny mpizahatany maniry hiaina izany fientanam-po izany dia azo andoavana sarany, mandritra ny fotoana voafaritra ahafahan'izy ireo mampiasa ilay toerana.
Na dia toa tsotra aza izany, raha ny tena izy dia mety misy olana logistika maromaro mila resahina.
Fa raha misy ny finiavana, sy ny sampan-draharaha samihafa tafiditra amin'izany dia afaka mahita ny fotoana rehetra, ary mahazo amin'ny halavan'ny halavany, manapaka ny birao ambany izay mazàna mazàna, dia azo antoka fa tsy ho sarotra izany.
Saingy ny teboka ankapobeny amin'ity volavolan-dalàna ity dia ny tsy tokony hieritreretantsika ivelan'ny boaty sy hahafantarana izay fotoana mety rehetra mety hitranga, indrindra rehefa misokatra tsikelikely ho an'ireo mpizahatany aorian'ny areti-mandringana. Efa zatra mikiaka sy mikarokaroka ny lesoka rehetra maharesy isika. Saingy mbola betsaka ny zavatra azo atao raha misy olona manentana sy manolo-tena vitsivitsy afaka hiaraka.
Ny fizahantany rahateo dia tena fampiroboroboana orinasa ary tsy misy famoronana, panache, mpilalao sarimihetsika ary fampisehoana endrika, inona no atao hoe orinasa fampisehoana?